[YEPAMUTEMO] kupora Data kubva iOS mudziyo - How-kuti Tungamirira
Ibva watanga, kuwana zvinokosha
dr.fone Toolkit - iOS Data kupora: How To
Part 1. kupora Data kubva iOS mudziyo chairo
Part 2. kupora Data kubva iTunes negadziriro yeparutivi
Part 3. kupora Data kubva iCloud negadziriro yeparutivi
Edza It Free Edza It Free
Step 1. Connect iOS mudziyo pamwe Computer
Vomurova dr.fone Toolkit pakombiyuta yako. Shandisai USB wire kunobva dzenyu iOS mudziyo kubatanidza wenyu iPhone, iPad kana iPod touch, kuti kombiyuta yako. Click on "Data Recovery" uye sarudza "pakurwara iOS mudziyo" kuita.
Tips: Usati achimhanya dr.fone, iwe vanotofanira kukopa ichangobva shanduro iTunes. Kuti udzivise rwoga sync, regai vomurova iTunes kana kumhanya dr.fone Toolkit. Ini pfungwa iwe chokukuvadza kuti automatical syncing muna iTunes kare: vomurova iTunes> Zvaunogona> mano, tarisa "Kukutadzisa iPods, iPhones, uye iPads kubva syncing kwaita".
Step 2. tarisei mudziyo wako nokuda Lost Data pamusoro It
Simply tinya "Start Scan" bhatani kuti chirongwa ichi tarisei yenyu iPhone, iPad kana iPod touch kuti atarise kuti dzadzimwa kana akarasika mashoko. The kushanda pakuvheneka d kwacho agare maminitsi mashoma, zvichienderana uwandu mashoko ari mudziyo wako. Munguva kushanda pakuvheneka muitiro, kana ukaona kuti mashoko chauri kutsvaka uripo, zvino unogona tinya "Mira" bhatani kumisa muitiro.
Step 3. Preview ari Scan Data
The Ongororo achakutora imwe nguva. Kamwe zviri kuvakwa, unogona kuona Scan mugumisiro kunotangira chirongwa. Data vose vakarasika uye iripo iri mudziyo wako rairatidzwa muzvikwata. Kuchenesa kunze dzadzimwa mashoko enyu iOS mudziyo, unogona Rova zvakasimba kusarudza "chete kuratidza dzadzimwa zvinhu" kuna ON. By nekudzvanya faira mhando iri kurutivi rworuboshwe, unogona vaone akawana mashoko. Uye unogona kuona pane kutsvaka bhokisi riri pamusoro rworudyi hwindo. Unogona kutsvaka imwe faira kuburikidza achitaipa rimwe guru iri kutsvaka bhokisi.
Step 4. kupora Data kubva Your iPhone / iPad / iPod touch
Kana iwe uwane mashoko aunoda, chete kuisa maki pamberi bhokisi kusarudza navo. Mushure ipapo, baya "achapora" bhatani nechepasi rworudyi hwindo. By default, ari akaporazve Data achaponeswa kuti kombiyuta yako. Kana mameseji, iMessage, neshamwari, kana zvinyorwa, kana iwe baya kupora, mumwe abuda vachakubvisisayi "kupora kuna Computer" kana "kusimuka kuti mudziyo". Kana uchida kuisa mashoko aya kudzokera kwako iOS mudziyo, baya 'kusimuka kuti mudziyo ".
Step 1. Sarudzai Recovery Mode
Vomurova dr.fone uye sarudza "pakurwara iTunes negadziriro yeparutivi File" kubva "Data Recovery" mudziyo. Mushure ipapo, iTunes negadziriro yeparutivi nokupora mudziyo achaita kuona iTunes zvose negadziriro yeparutivi mafaira pakombiyuta ichi uye tohuratidza pahwindo. Unogona kusimbisa ndoupi mumwe unofanira maererano dating rakachengetedzwa zvakasikwa.
Step 2. Scan Data kubva iTunes negadziriro yeparutivi File
Sarudza iTunes negadziriro yeparutivi faira kuti rine mashoko uchida kupora uye baya "Start Scan". Zvichatora maminitsi mashoma dzokubvisa umboo zvose kubva iTunes negadziriro yeparutivi faira. Shivirira.
Step 3. Preview uye kupora Data kubva iTunes negadziriro yeparutivi
Mushure masekondi mashoma, mashoko ose ari negadziriro yeparutivi faira zvichabviswa zvikaramba uye kuratidzwa muzvikwata. Unogona vaone navo mumwe nomumwe pamberi kupora. Zvadaro unogona zvokusarudza kutara uye achapora avo uchida nokutsikirira pasi "achapora" bhatani nechepasi. Zvino vaaizivana, manotsi uye mashoko anogona ngaapiwe zvakananga yako iOS mudziyo kana ukachengeta yako iOS mudziyo kwakabatana kombiyuta yako Via imwe USB wire panguva pakupora rikurumidze.
Tips: unogona kuona pane kutsvaka bhokisi iri mugumisiro pahwindo. Kubva ipapo, unogona kutaipa muzita faira kutsvaga payo.
Pashure kumhanya dr.fone Toolkit, kusarudza kupora kwadzinoita "pakurwara iCloud negadziriro yeparutivi Files" kubva "Data Recovery" pamusoro dashboard. Zvadaro muchaona hwindo pazasi. Pindai zvenyu iCloud nhoroondo uye pasiwedhi kuti login. dr.fone anotora wako zvakavanzika zvakakomba. Hatina kumbobvira chinyorwa chipi wenyu Apple nhoroondo Info kana kugutsikana chero panguva yezvirongwa yenyu.
Step 2. Download iCloud negadziriro yeparutivi File
Kana iwe Logged kupinda iCloud, Chirongwa angawana zvose iCloud negadziriro yeparutivi mafaira munhoroondo yenyu. Sarudzai mumwe apo uchazova kuwanazve mashoko uye tinya "Download" bhatani.
Zvino ari abuda, unogona kusarudza mhando mafaira zvaungada kudhanilodha. Izvi kuchaderedza nguva kudhanilodha iCloud negadziriro yeparutivi faira. Pashure paizvozvo, unogona atarise iCloud kugutsikana ikozvino. Click on "Scan" bhatani kutanga. It achakutora imwe nguva. Just kumirira kwekanguva.
Step 3. Preview uye kupora Data kubva iCloud negadziriro yeparutivi File
The Ongororo uchava wakazara mumaminitsi mashoma. Kamwe nayo anomira, unogona kutoziva zvinenge zvose Data yako iCloud ndipo pachinobatsirawo faira, kufanana neshamwari, mashoko, mapikicha, uye zvakawanda. Ongorora kuti imwe uye ratidza kuti chinhu chaunoda. Zvadaro tinya "kupora kuna Computer" kana "kusimuka kuti mudziyo wako" bhatani kuti vavaponese kombiyuta yako kana wako mudziyo mumwe watinya.
Zvino vaaizivana, mashoko uye manotsi zvinogona ngaapiwe zvakananga yako iOS mudziyo kana wako iPhone, iPad kana iPod touch hwakabatana kombiyuta yako USB wire panguva pakupora rikurumidze.
Gadza, Update, Uninstall